Maanguddoon waggaa 87 looniin jifatamanii ajjeefaman - BBC News Afaan Oromoo
Maanguddoon waggaa 87 looniin jifatamanii ajjeefaman
Goodayyaa suuraa Maangiddoo waggaa 87 Hilaarii Adaayar
Maanguddoonni wagggaa 87, Hilaarii Adaayar bakka jireenyaa isaaniitti loon mufataniitu waraanamanii du'uunsaanii dhagahame.
Aaddee Hilaarii Adaayar miidhaan kun kan irra gahe loon biftisaanii makaa adii qabaniin yoo ta'u, maanguddoon kun erga jifatamanii kufanii booda ka'uuf wayita yaalanittis irra deebiin akka miidhaa irraan gahan himame.
Isaan boodas gara hospitaalaatti geeffaman illee torban tokkoof osoo of hinbariin turuun du'unsaanii himameera.
Saawwan maanguddoo tana miidhuun du'aaf saaxilan kunneenis guyyaa tokkoon dura haadha warraafi abbaa warraa saree isaanii waliin bashannanaa turan arii'achuun miidhaa irraan qaqqabsiisuun isaanii barameera.
Sangaa Awustiraaliyaa kg1,400 ulfaatuufi m1.94 dheeratu
Abbaan qabeenyaa loon kanaas mana murtiitti kan dhiyeeffaman yoo ta'u, miidhaa saawwan kunnneen namootarraan gahaa jiran xiyyeeffannaa kennuun hordofaa akka hinturre himameera
Biraayiyoonii Diilaamor wayita maanguddoon kun saawwaniin waraanaman kan arge yoo ta'u, isheenis of ittisuuf wayita sochii taasiftuutti caalaa waraanuun miidhaa irraan gahusaanii dhugaa baheera.
Akkasumas Reechel Toomsan miidhaa kana guyyaa tokkoon dura, loonumti kunneen isheefi abbaa warraa ishee Kaarl irraan miidhaan qaqaabsisuu isaanii mana murtee duratti dhugaa baate jirti.
Goodayyaa suuraa Maanguddoon loon sanyii kanaatiin waraanaman
Saawwaan kunneen erga miidhaa jara kana irran qaqabsiisaniin booda gara biraatti akka dabarfaman taasifamee tures jedhaniiru.
Isaan booda haala ture guyyaa tokkoon booda ilaaluuf karoorfamu illeen garuu maanguddoo Hilaarii irraan miidhaa qaqqabsiisuun jedhame.
Ergasiin booda garuu abbaan qabeenyaa saawwan kanaa amma waa'ee dhimmichaarratti marii cimaa taasisaa jirra jedheera. Maatii waliin marii taasisaa jiru. Hawaasa naannoo waliinis gama lafa dheedichaa ilaallatuun murte kamuu taasisuun dura akka isaan marisiisu himaniiru.
Qondaalli poolisii olaanaa naannichaa saawwaan manguddoo kana irraan miidhaa akka qaqqabsiisaniif maal akka isaan kakaasee wanti beekame tokkoolleen hinjiru jedhaniiru.
Haa ta'u malee balaan ajjeechaa saaawwaan kunneen maanguddoo kana irraan qaqqabsiisan kunis, loon wayita muufata hangam balaafamoo ta'usaanirratti hubannoo kan uumedha jedaniiru.
Sangaan Awustiraaliyaa guddichi Niikars jedhamu gurguramuu hin dandeenye
Lammiileen Itoophiyaa Sa'uudiitti hidhaarra turan biyyatti deebi'an